Sh. Shariif “Ciidamada Kenya inay iska soo galaan Somalia raali kama nihin dawlad &” – SBC
Sh. Shariif “Ciidamada Kenya inay iska soo galaan Somalia raali kama nihin dawlad &”
Madaxweynaha dawlada KMG Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa markii ugu horeysay maanta ka hadlay ciidamada Kenya ee iska soo galey gudaha Soomaaliya kuwaasi oo sheegayana inay la dagaalamayaan xoogaga Shabaabka.
Shir jaraa’id oo uu ku qabtey degmada Dayniile gaar ahaan qaybaha ay gacanta ku hayaan ciidamada AMISOM iyo dawlada KMG Soomaliya ayuu wuxuu ku muujiyey sida aanay raali uga aheyn soo galintaanka ciidamada Kenya “In ciidamo ka socda Kenya isk asoo galaan gudaha Soomaaliya iyagoon waxba naga ogeysiin ma ahan mid aan raali ka nahay shacab ahaan iyo dawlad ahaan, waana mid aan habooneyn” ayuu yiri Madaxweynuhu.
“Sidaad la socotiina ciidamada hadda jooga ee AMISOM waxay ku joogaan oggolaansho Dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka iyo mandate uu siisay Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika” ayuu hadalkiisa sii raaciyey Sheekh Shariif oo muujiyey inaanay dawlad ahaan wax war ah ka hayn ciidamada Kenya ee soo galey dalka, isla markaana aan lagu soo wargalin.
“Kenya waxaa naga dhaxeeya iskaashi laakiin waxaan kala hadalnay habka aan anaga u rabno inay noo kaalmeeyaan inuu yahay hab cad oo ah in Ciidamada Qalabka Sida inay diyaar u yihiin inay shaqada qabsadaan, Kenyana aan uga baahanahay inay gacan siiyaan ciidamada ee aysan dhicin wax intaas ka duwan. Wadashaqeyn xooggana ay jirto oo laga wada shaqeeyo nabadda iyo soo-celinta nabadda dalka.” ayuu yiri Madaxweynaha dawlada KMG.
Sheekh Shariif wuxuu farta ku fiiqay in Kenya ay gaarsiiyeen inaanay raali ka aheyn in Al-Shabaab & Al-Qaacida ay dhibaato u geystaan dalkooda, isla markaana ay diyaar dawlad ahaan u yihiin sidii ay isaga kaashan lahaayeen arimaha amaanka”.
“Waxaan fileyno waxay yihiin iskaashigaas laga wada hadlay oo aan filayo inaad ogtihiin in magaalada Addis Ababana shir lagu qabtay IGAD, ujeeddaduna ay ahayd in la ilaaliyo in la ilaaliyo darisnimada iyo nabadda deegaanka, aanay dhicin wax keeni kara mugdi ama shaki keeni kara, ama gelin kara dowladaha ama gelin kara shucuubta.”
Hadalka Madaxweynaha ayaa ku soo aadaya iyadoo ciidamo ka socda Kenya ay gudaha u soo galeen masaafo gaaraysa 100 Km arintaasi oo shacabka Soomaaliyeed ay si weyn uga muujiyeen caro, waxaana la filayaa in hadalka Madaxweynaha uu taageero kala kulmo shacabka Soomaaliyeed.